The 6 Tsy maintsy Andramo Aotrisiana vilia
ny Elizabeth Kawamura
Fotoana famakiana: 7 minitra Ireo no Musings eo an-toerana tsara indrindra hatramin'izay aho sakafo nahafinaritra, nandritra ho Mpanohana ahy any Aotrisy. Tany amin'ny fahavaratra aho 2016 fa ny 4 volana internship amin'ny kely-salantsalany ONG eo an-toerana. Ny traikefa internship Tena lehibe, that I got to meet…
Fotoana famakiana: 5 minitra Divay tena rehetra dia mahafantatra fa tia divay tanàna any Eoropa manolotra takatry ny divay sy mahagaga. Avy any Frantsa ny Italia, ary koa, ireo no amantarana firenena maro mba manana divay tsara indrindra eto an-tany. anisan'ny, izany dia vokatry ny fitomboan'ny toetrandro mety…